Maxaa sababay xil ka qaadista xilligan ciidanka Booliska? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa sababay xil ka qaadista xilligan ciidanka Booliska?
Dad badani waxay is weydiinayaan sababta ku soo beegtay xilligan in xilalkii laga qaado saraakiil ka tirsan ciidanka Booliska Soomaaliyeed, iyadoo lagu guda jiro xilli kala-guur ah!
MUQDISHO, Soomaaliya Isbedelo xoog leh ayaa lagu sameeyay taliyeyaasha ciidamada booliska Soomaaliyeed, iyadoo qaarna xilalkii laga qaaday qaarna isbaddal lagu sameeyay tan iyo markii muddo xileedka hay'adaha iyo dowladda iyo madaxweyne Farmaajo uu Golaha Shacabka ugu kordhiyey laba sano.
Inta badan taliyeyaasha booliska degmooyinka Muqdisho waxaa lagu sameeyay isku-shaandheyn, qaar waa la eryay sidda hogaanka bileyska degmooyinka Waaberi iyo Howlwadaag - wararku waxay xusayaan in loo beegsaday tuhun ku saabsan in ay gacansaar la leeyihiin taliyihii hore ee ciidanka Booliska Gobolka Benaadir Saadaq John oo xilkii laga qaaday darajadiina laga xayuubiyay!
12/Apriil/2021 ayuu Taliye Saadaq John sheegay inuu hor istaagay kulankii Golaha Shacabka BJFS oo qorsheynayay muddo kororsi, wax ka yar muddo saacad ah waxaa xafiiska Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Taliiye Xijaar kasoo baxday wareegto xilkii looga qaaday Taliye Saadaq John oo si buuxda uga hor yimid qorshihii silsiladda ee isku xirnaa kaasoo muddo kororsi loogu sameynayay madaxweyne Farmaajo!
Intaa kaddib, waxaa xilalkii laga qaaday taliyeyaal boolis degmo, taliye qeybeedyo iyo taliye ku xigeenkii qeybta guud ee Boooliska Soomaaliyeed.
Haddaba maxay tahay sababta xilligan kusoo aaddisay in xil ka qaadis lagu sameeyo qeybaha kala duwan ee ciidanka Booliska Soomaaliyeed? oo aysan la qabin qeybaha kale ee ciidamada sida kuwa Milatariga, Asluubta iyo Nabad-sugidda!
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa tijaabinaya tillaabadan lagu sumcad dilayo ciidanka Booliska oo loogu talagalay in ay qeyb ka qaataan xasilinta amniga magaalada, waxa uuna madaxweyne Farmaajo u adeegsanayaa sidii uu ku meel marin lahaa damiciisa ku aaddan muddo kororsiga, horay wuxuu ugu fashilmay oo eedeyn xoog leh uga timid adeegsigii ciidamada NISA iyo kuwa milatariga ee uu uadeegsaday weerarkii Hotel Maida ee madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo musharaxiintii bannaanbaxa dhigayay oo rasaas nool-nool loo adeegsaday!
Fashilkii maanlintaa ku dhacay Farmaajo kaddib wuxuu go'aansaday in taa baddalkeeda la adeegsado ciidamada Booliska, si loogu marmarsiyoodo in ciidankan ay ka shaqeynayaan Amniga, siyaasadna aysan shaqo ku lahayn! Markii ay fulin waayeen awaamiirtii loo diray ayuu billaabay Farmaajo in xil ka qaadis lagu sameeyo, iyadoo xilligan kala guurka ahna uu si cadaawad ku dheehantahay uu darajadii ciidan uga xayuubiyo saraakiishii ka hor timid muddo kororsiga!